Maitiro ekuchinjisa raibhurari yako iTunes kune imwe komputa | IPhone nhau
Tinoenderera mberi kutsanangura zvakadzama nezve iTunes, iko kunyorera kweMac uye Windows inotibvumidza kubata raibhurari yemultimedia yemidziyo yedu yeIOS, kuisa zvinoshandiswa, kudzoreredza michina kana kugadzira makopi ekuchengetedza. Nhasi tichaenda kunoona maitiro atingaendesa kunze kwedu raibhurari kuti tishandise pane imwe komputa, chimwe chinhu chinobatsira kana takatenga komputa nyowani, kana kungoda kuita backup yechero fomu yekupedzisira yekomputa yedu. Iyo yakapusa maitiro uye inogona kutiponesa yakawanda nguva.
Maitiro akareruka, asi anogona kuve nenzira dzakasiyana, kunyangwe munhu wese pakupedzisira achitsvaga chinhu chimwe chete. Nhasi ticha tsanangura iyo yandinowanzo shandisa, iyo zvakare inoita senge kwandiri yakapusa, uye inonyanya kuve ne tumira dura racho rine raibhurari yese kune imwe nzvimbo.
Dhairekodhi iri hakuna mumwe kunze kwe "iTunes". Iko kwazviri kwevashandisi veMac OS X kuri pachena, mukati me "Music" dhairekitori. Kune vashandisi veWindows zvakati wandei "zvakavanzwa" asi hazvina kuomesa futi. Zvichienderana neshanduro yeWindows yaunoshandisa, nzira dzinosiyana:
Windows XP: Zvinyorwa uye ZvirongwausernameMy DocumentsMy Music
Windows Vista: UsersusernameMusic
Windows 7 uye 8: VashandisiZitaGameMy Music
Iyo iTunes folda ndiyo ine raibhurari yako yese: mimhanzi, kunyorera, mavhidhiyo, podcast, nezvimwe. Sevha kune yako yekunze hard drive kana iwe uchida kugadzira backup kopi, kana kuiendesa kunzvimbo imwechete pane imwe komputa kana uchizoishandisa nayo.
Chinhu chakakosha ndechekuti kana iwe uchizoshandisa komputa nyowani, kare Iwe unofanirwa kuibvumidza iyo kuti iwe ugone kuwana kune ese maapplication, mimhanzi uye mavhidhiyo anotorwa kubva kuApp Store kana iTunes. Kuti uite izvi, mune iTunes menyu, mu "Chitoro" sarudza "Bvumidza iyi komputa." Rangarira zvakare kuti kana iwe uchizorega kushandisa iyo yekare komputa iwe unofanirwa kubvisa mvumo, nekuti iwe unogona chete kubvumidza mashanu emakomputa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » Maitiro ekufambisa raibhurari yako iTunes kune imwe komputa
Ollocase, iyo nyowani Olloclip kesi ye iPhone 6 uye 6 Plus